Okuhlangenwe nakho kwabafundi. Thola Usizo Oludingayo Ukuze Uphumelele EHodges University
Siyakwamukela ku-Student Experience
Kusuka kwabasanda kubhaliselwa i-alum, siyisikhungo sakho esisemthethweni sokukusiza ukuthi ube umfundi ophumelelayo lapha eHodges University. Amahhovisi ethu aitholakala futhi noma eduze komtapo wezincwadi oseFort Myers Campus eHodges University. Ngokwengeziwe, siyatholakala kubo bonke abafundi ngocingo kanye / noma ngombhalo futhi.
Umnyango wethu uhlinzeka ngezinsizakusebenza nokuxhasa kulezi zindawo ezilandelayo:
Izindawo zokuhlala zabafundi / i-ADA
Imisebenzi Yezidingo Ezikhethekile
Silapha ukuzosiza. Sicela uthumele i-imeyili impumelelo@hodges.edu noma ushayele u-239-938-7730 ngemibuzo noma ngesidingo sokucela izinsizakalo.
Ukwelulekwa Kwempumelelo Yezemfundo kumaphakathi nehhovisi le-Student Experience kanti abeluleki babelwa abafundi ngokususelwa kuhlelo lwabo lweziqu nasesikoleni semfundo. Uyakhuthazwa ukwakha ubuhlobo noMeluleki Wokuhlangenwe Nakho Kwezitshudeni futhi uxhumane njalo ukuze uthole ukuholwa nokusekelwa ngezinhloso zakho zemfundo.
Abafundi abasha, kanye nalabo ababuyela eNyuvesi, bayakhuthazwa ukuthi baqedele uhlelo lwe-online orientation olwenziwe yi-Student Experience. I-orientation izokwethula kuzinsizakusebenza ezitholakalayo zokuphumelela ezifundweni futhi ikusekele ekuzameni ulwazi lwenyuvesi.
Ukuqondiswa kwabafundi nokukhuthaza
Abeluleki be-Student Experience bakunikeza umhlahlandlela maqondana nemibuzo nokukhathazeka, benza ukuxhumana ukuxazulula izinkinga ezingavela. Ukudluliselwa kokwelulekwa ngokwengqondo kuyatholakala lapho kudingeka. Ummeli nokwelulekwa kokukhathazeka kwezemfundo imvamisa izikhathi ziqala ku-Student Experience. Abafundi kufanele bafinyelele kumeluleki wabo wezemfundo wabafundi njengendawo yokuqala yokuxhumana nemibuzo nokukhathazeka.
Imininingwane Yomfundi Yomhlaba Wonke
IHodges University inikezelwe empumelelweni yakho yezemfundo, futhi ukukusekela ekuzulazuleni ulwazi lwenyuvesi uzonikezwa umeluleki we-Student Experience Advisor. Abeluleki baseHodges University basiza abafundi ekukhetheni izifundo nasekuhleleni kwezemfundo ukuqinisekisa ukuthi bayaphumelela eyunivesithi.
Abafundi be-F1 kufanele babhekise kwifayela le- Umhlahlandlela Wabafundi Womhlaba Wonke noma Gcina Isimo Sakho Amawebhusayithi Wokuphepha Kwasekhaya ngolwazi oluzodinga ukugcina isimo sakho somfundi. Uma unanoma yimiphi imibuzo, xhumana ne-Designated School Official (DSO) e-Office of Student Experience.
IHhovisi Lokuhlangenwe Nabafundi libuye linikeze izeluleko ngemisebenzi yokukusiza ekutholeni umsebenzi wamaphupho akho. Kusuka ku- bechaza imithetho yokuxoxisana namathiphu, silapha ukukusiza ukukuqondisa.
Usizo Lwabafundi Nabe-Alumni
Ukuhlola umsebenzi nokuhlola
Imininingwane yomqashi kanye nemakethe yezabasebenzi, kufaka phakathi ukuqashwa kwamakhampasi kanye nemibukiso yemisebenzi
Xhuma naye I-CareerSource Southwest Florida ozibophezele ekusizeni ukuthola isikhundla ozoyithanda
Ibhodi yemisebenzi eku-inthanethi ( www.collegecentral.com/hodges)
Imisebenzi yokuthumela ebhekise kubafundi nakuma-alumni esikoleni sethu
Sesha imisebenzi ethunyelwe esikoleni sethu
Thumela amathuba omsebenzi kanye ne-internship ebhodini lethu lemisebenzi eku-inthanethi (www.collegecentral.com/hodges)
Faka isixhumanisi sewebhusayithi yenkampani yakho ekhasini labaQashi Bendawo
Ukuqashwa ekolishi ngokusebenzisa uHlelo loMqashi
Isikhangiso samahhala semicimbi ekhethekile yokuqasha
Ukubamba iqhaza emibonisweni yemisebenzi
Sizibophezele ekunikezeni ukufinyelela okulinganayo namathuba alinganayo kubafundi bethu. Abafundi abanenkinga yokukhubazeka kufanele baxhumane nathi ukuhlela ukujwayela esikhungweni, noma ukuxoxa nganoma yiluphi usizo oludingekayo ukuze kuphothulwe uhlelo lwezifundo. Noma ngubani odinga usizo kufanele axhumane ngqo noma i-imeyili abelwe Umxhumanisi Wabafundi Ababelwe impumelelo@hodges.edu; ifoni: 800-466-0019.
Imininingwane engaphezulu mayelana nokuhlala kwabafundi ingatholakala kithi I-Student Handbook.
IHodges University izibophezele ekugcineni indawo yezemfundo engenakho ukucwaswa nokuhlukunyezwa kanti inhloso yethu ukuthi ukukhathazeka kwabafundi kubhekwane nakho ngokushesha futhi kuxazululwe ngendlela efanelekile kuzo zonke izinhlaka ezithintekayo. Uma uzwa ukuthi noma isiphi isimo esikuthintayo asinabulungiswa, siyabandlulula, noma sidala ubunzima obungadingekile, xhumana noMnyango Wokuhlangenwe Nabafundi ngokushesha okukhulu ukuze sikwazi ukusebenzela esinqumweni.
Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane.
IHodges University isungule izindinganiso zemihlahlandlela kwezemfundo kanye nokuziphatha kanye nemikhombandlela yokuthuthukisa ukuqwashisa kwabafundi kanye nokuzibophezela emphakathini waseNyuvesi kanye nasenhlanganweni. Abafundi abephula amaZinga Wokuziphatha Kwabafundi bangaphansi kwenqubo esemthethweni ngenkathi izinsolo zihlolwa bese kwenziwa isinqumo sokuqondiswa kwezigwegwe.